Laboratory dzakatevedzana Vagadziri & Vatengesi - China laboratori dzakateedzana Fekitori
BA200 Inotakurika yebhuruu-girini algae analyzer
Iyo inotakurika bhuruu-girini algae analyzer inoumbwa neyekutakurika inomiririra uye inotakurika bhuruu-girini algae sensor. Nekutora mukana wehunhu hwekuti cyanobacteria ine yekumusoro yepamusoro uye yekumusoro yepamusoro mune yakasarudzika, inoburitsa monochromatic mwenje weiyo chaiyo wavelength kumvura. Cyanobacteria iri mumvura inonatsa simba reye monochromatic mwenje uye inoburitsa monochromatic mwenje weimwe wavelength. Iyo mwenje simba rinobudiswa nebhuruu-girini algae yakaenzana nezviri mukati meiyo cyanobacteria iri mumvura.
CH200 Inotakurika chlorophyll analyzer
Portable chlorophyll analyzer inoumbwa inotakurika inomiririra uye inotakurika chlorophyll sensor.Chlorophyll sensor iri kushandisa shizha pigment yekumwesa misoro mumatope uye emission yepamusoro yezvivakwa, mune chakatarwa cheklorophyll yekumisikidza yepamusoro emission monochromatic mwenje kuratidzwa kumvura, iyo chlorophyll iri mukumwa kwemvura. yesimba simba uye kuburitsa imwe emission yepamusoro wavelength yechiedza che monochromatic, chlorophyll, iyo emission kusimba kwakaenzana nezviri mukati mekirorofiri mumvura.
CON200 Inotakurika Conductivity / TDS / Salinity Meter
CON200 inochengetwa inodzora tester yakanyatsogadzirirwa kuyedza kwakawanda-paramende, ichipa imwe-yekumira mhinduro yekuitisa, TDS, munyu uye kuyedza tembiricha. CON200 zvigadzirwa zvakateedzana zvine chaiyo uye zvinoshanda dhizaini dhizaini; mashandiro mashoma, mashandiro ane simba, akakwana kuyera paramita, yakafara kuyera renji;
DH200 Inotakurika Yakabviswa Hydrogen mita
DH200 dzakateedzana zvigadzirwa zvine chaiyo uye inoshanda dhizaini dhizaini; inotakurika DH200 Yanyungudutswa Hydrogen mita: Kuyera Hydrogen Yakapfuma mvura, Yakanyungudutswa Hydrogen kusangana muHydrogen mvura jenareta. Zvakare zvinokugonesa kuyera iyo ORP mune electrolytic mvura.
DO200 Inotakurika Dissolve Oxygen Meter
Iyo yakagadziriswa resolution yakanyungudutswa oksijeni tester ine zvakawanda zvakanakira munzvimbo dzakasiyana senge mvura yakasviba, aquaculture uye kuvirisa, nezvimwe.
Nyore oparesheni, masimba masimba, akakwana kuyera parameter, yakafara kuyera renji;
imwe kiyi yekugadzirisa uye otomatiki kuzivikanwa kupedzisa kururamisa maitiro; yakajeka uye inoverengwa inoratidzira interface, yakanakisa inopesana nekukanganisa kuita, kuyerwa kwakaringana, mashandiro ari nyore, akasanganiswa neakakwira kupenya backlight mwenje;
DO200 chishandiso chako chehunyanzvi chekuyedza uye mudiwa akavimbika kumarabhoritari, mashopu uye zvikoro zvezuva nezuva basa rekuyera.
LDO200 Inotakurika Yakabviswa Oxygen Analyzer
Anotakurika akaputswa okisijeni midziyo inoumbwa neinjini huru uye fluorescence yakanyungudutswa oksijeni sensor. Yepamberi fluorescence nzira inogamuchirwa kuona chirevo, hapana membrane uye electrolyte, hazvo hapana kugadzirisa, hapana oxygen yekushandisa panguva yekuyera, hapana kuyerera chiyero / kunetsekana zvinodiwa; Iine NTC tembiricha-muripo basa, iyo mhedzisiro mhedzisiro ine yakanaka kudzokorora uye kugadzikana.
PH200 Inotakurika PH / ORP / lon / Temp Meter
PH200 akateedzana zvigadzirwa zvine chaiyo uye inoshanda dhizaini dhizaini;
Maseti mana ane gumi nemapfumbamwe akaenzana emvura, imwe kiyi kuenzanisa uye otomatiki kuzivikanwa kupedzisa kururamisa maitiro.
Yakajeka uye inoverengwa inoratidzira interface, yakanakisa yekurwisa-kupindira kuita, kuyerwa kwakaringana, mashandiro ari nyore, akasanganiswa neakakwira kupenya backlight mwenje;
PH200 chishandiso chako chehunyanzvi chekuyedza uye mudiwa akavimbika kumarabhoritari, mashopu uye zvikoro zvezuva nezuva basa rekuyera.
TSS200 Inotakurika Yakasimudzwa Solids Analyzer
Zvimiti zvakamiswa zvinoreva chinhu chakasimba chakamiswa mumvura, kusanganisira inorganic, organic chinhu uye jecha revhu, ivhu, tupukanana tudiki, nezvimwewo izvo hazvinyungudike mumvura. Yakasimudzwa nyaya yezvinyorwa mumvura ndeimwe yemakenduru kuyera mwero wekushatiswa kwemvura.
TUR200 Inotakurika Turbidity Analyzer
Turbidity inoreva mwero wekudzivirira kunokonzerwa nemhinduro yekufamba kwechiedza. Inosanganisira kumwayiwa kwechiedza nezvinhu zvakamiswa uye kuyamwa kwechiedza nema solute mamorekuru. Turbidity yemvura haina hukama chete nezviri mukati mezvinhu zvakamiswa mumvura, asi zvakare zvine hukama nehukuru hwazvo, chimiro uye coefficient yekudzora.
TUS200 Inotakurika Turbidity Tester
Anotakurika turbidity tester inogona kushandiswa zvakanyanya mukuchengetedza kwezvakatipoteredza madhipatimendi, pombi yemvura, tsvina, maguta emvura, emvura maindasitiri, makoji ehurumende nemayunivhesiti, mishonga indasitiri, hutano uye chirwere kudzora uye mamwe madhipatimendi ekugadzika kwe turbidity, kwete chete yemunda uye pa-saiti kukurumidza kwemhando yemvura kuongororwa nechimbichimbi, asi zvakare nekuongororwa kwerabhoritari yemhando yemvura.
Yakanyungudutswa Carbon Dioxide Meter / CO2 Tester-CO230
Yakanyungudutswa kabhoni dhayokisaidhi (CO2) inozivikanwa inozivikanwa paramende mune bioprocesses nekuda kwekukosha kwayo pane maseru metabolism uye nehunhu hwehunhu hunhu. Maitiro anomhanya padiki-siki anotarisana nematambudziko mazhinji nekuda kwesarudzo shoma kune modular sensors yekutarisa online uye kutonga. Ma sensors echinyakare akakura, anodhura, uye anokuvadza mune zvakasikwa uye haakwani mudiki-masystem masystem. Muchidzidzo ichi, tinopa kuiswa kweinovel, ratidziro - yakavakirwa matekiniki e-pamunda kuyerwa kwe CO2 mune bioprocesses. Iyo gasi mukati mekuferefetwa yakazobvumidzwa kudzokororazve kuburikidza negasi - risingapindike tubhu kune CO230 mita.
Kuitisa / TDS / Kunaka Meter / Tester-CON30
ICON30 ine mutengo wehupfumi, wakavimbika EC / TDS / Salinity mita iyo yakanakira kuyedza maficha senge hydroponics & kurima gadheni, madziva & spas, aquariums & reef tanks, mvura ionizers, yekumwa mvura uye nezvimwe.
Titanium Alloy Kuitisa Shungu, Chlorophyll Sensor, Ph Sensor Electrode, Electromagnetic Kuitisa Inzwa, Kufambisa TDS Sensor, Quadrupole Graphite Kuitisa Shungu,